बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’ - IAUA
ramkrishna October 22, 2017	अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सरमधुमेहमुटु रोग
हाम्रा पाकघरमा असार महीनाको छेकछाकतिर सब्जीको रूपमा पाक्ने परिकारमध्ये एउटा हो बाँसको तामा । अंग्रेजीमा बेम्बो शूट भनिने यो परिकारलाई हामी तामा भनेर चिन्छौं।
हामी यसो त धेरैप्रकारका बाँसको तामा सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्दछौं, तरै पनि प्रचलित रूपमा चोयाबाँस वा जुन बाँसबाट चोया बनाउन सकिन्छ, त्यस्ता बाँसको तामा खानेगर्छौं भने परेङ (सानो प्रजातिको बाँस, जसबाट चित्रा बनाइन्छ) को तामा पनि
हामी सब्जीको रूपमा खान्छौं । ठूला बाँसको तामाभन्दा साना प्रजातिका बाँसको तामा खानको निम्ति निक्कै स्वादिष्ट हुन्छ ।
यसलाई परिकारको रूपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अचारको रूपमा राखेर धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्नसकिन्छ।
त्यसो गर्नु यसको स्वास्थ्यवर्धक लाभबाट वञ्चिथ हुनुबाहेक अरु केही होइन । तपाईंलाई थाहा छ, वैज्ञानिकहरूको खोजपछि तिनीहरूले यसलाई ‘साइलेण्ट डाक्टर’किन भनेका हुन् ? हामीले प्राचीन कालदेखि सब्जीको रूपमा खाँदै आएको तामा त साइलेण्ट डाक्टर अथवा (अबोला वैद्य) पो रहेछ त।
तिनीहरूले बाँसको टुसामाथि अनुसन्धान गरेपछि के-के पाए त भन्ने कुरालाई यहाँ छोटकरीमा भए पनि राख्नैपर्छ, जुन कुराले यसको स्वास्थ्यपरक लाभहरूको बारेमा बताउँछ :-
बाँसको तामामा कम क्यालोरीका तत्त्वहरू हुन्छन् जुन कुरालाई हामी ‘छैन’-को बराबर ठान्न सक्छौं । त्यस्तै गरी यसमा अत्यन्तै कम कार्बोहाइड्रेट्स तत्त्वहरू हुन्छ, यसो हुनाले यो अब मधुमेहका रोगीहरूलाई पनि जच्ने परिकार भयो।
अर्कोतिर, अति न्युन क्यालोरी हुनाको कारण यसले शरीरको ‘फ्याट लस’ वा बोसो घटाउन (सोझो अर्थमा ओजन कम गर्न)मा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यस्तै गरी तामा खाद्यपरक तन्तुयुक्त हुनेहुनाले यसलाई पाचकको रूपमा पनि प्रयोग गर्नसकिन्छ ।
यति कम चिनी हुने खाद्य परिकार अरु लगभग कुनै छैन । यस्तै गरी यसमा कति फ्याट हुन्छ भनेर जान्न चाहने हो भने त्यसको उत्तर हो ०.४९ ग्राम। अर्कोतिर, यसमा हुने संतृप्त वा असंतृप्त दुवै प्रकारका फ्याट वा तैलीय पदार्थ शरीरको निम्ति लाभदायक हुन्छ ।
यसमा फ्याट अनि सुगर पनि नगण्य रूपमा हुने हुनाले यसले कोलेस्ट्रोलको एलडीएल स्तर, लिपिड्स र बाउल फँक्शन कम गर्दछ, त्यसैले यो खाद्य परिकारलाई मुटुको स्वास्थ्यमैत्री खाद्य भनिएको छ ।
यी भिटामिनहरू र मिनेरलहरूको उपस्थितिले यो सब्जीलाई हाम्रो इम्युन सिस्टम वा रोग प्रतिरोधक क्षमता अझ सशक्त तुल्याइदिने प्राकृतिक क्षमतावान बनाइदिएको छ ।
तामामा रहेको फाइटोस्टेरोल्सहरू जस्तै क्लोरोफिल, एमिलेज र फ्लोभिनहरूले शरीरमा क्यान्सर विकासलाई नष्ट गर्दछ अथवा हाम्रो शरीरमा सजिलै क्यान्सर रोगको विकास हुँदैहुँदैन ।
तामाको सब्जी खानेहरूमा क्यान्सर हुने डर कम हुन्छ र क्यान्सर विकास हुने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्दछ । त्यस्तै गरी यो सब्जीले अल्सर र आँत वा आन्ध्राका रोगहरू पनि निको पार्न सहयोग पुग्दछ ।
तामामा हुने रसमा एण्टि इन्फ्लेमेटरी (जलन-रोधी) र एनल्जेसिक (शारीरिक दुखाइ कम गर्ने गुण भएका) तत्त्वहरू पनि हुन्छ ।
पेटको दुखाइका साथै अल्सर तथा आन्ध्राका घाउहरू कम हुन तामाले सहयोग पुग्दछ । यस्तै गरी तामाको रसमा यस्ता तत्त्वहरू पनि शोधगर्दा भेटियो कि जसले महिलाको मासिक श्राव नियमित गर्न सहयोग पुग्दछ।
यसमा हुने तत्त्वले अधिक वा न्युन मासिक श्रावलाई नियन्त्रित गर्दछ। त्यसबाहेक यसले कतिपय गाइनोकलजिकल समस्याहरू पनि नियन्त्रित गर्दछ ।
तामामा हुने एक प्रकारको तत्त्वले गर्भवती अवस्थाको अन्तिम महीनामा महिलालाई यथासमयमा प्रसवको निम्ति औषधिकै काम गर्छ।
प्रसव समय लम्बिएर जाँदैन। तामाले यसबाहेक पिसाबघरका कतिपय समस्याहरू (पिसाबनली संकीर्ण भएको अथवा अति विस्तृत भएको अवस्थामा, स्त्री-पुरुष दुवैको) त्यसलाई सही बनाउन पनि औषधिको काम गर्छ।
रगतमा सोडियम (नुनजन्य पदार्थ)-को मात्रा धेरै हुँदा रक्तचाप बढ़ेको हो भने पोटासियमको मात्रा धेरै हुने तामाले रक्तचाप नियन्त्रण गर्नमा सहयोग गर्दछ।
यसमा हुने उच्च गुणयुक्त एण्टिएनल्जेसिक तत्त्वहरूले मानिसमा अवसाद वा नैराश्यता कम गर्ने, छटपटी कम गर्ने काम गर्छ भने मानसिक सक्रियता बढ़ाउने काममा पनि यसमा हुने पोटासियम र अन्य तत्त्वहरूले सहयोग गर्दछ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसको अमिल्याइएको अचारहरू भने सबैको निम्ति सही नजच्ने हुँदा सबैले यस्ता अचारको सेवन नगरेको राम्रो हुन्छ।
Previous Previous post: यी खाना खाएको तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन
Next Next post: छारे रोगका बारेमा जान्नैपर्ने कुराहरु